Salaad Cali Jeelle oo si rasmi ah u taageeray howlgalka hub ka dhigista ee Muqdisho (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Salaad Cali Jeelle oo si rasmi ah u taageeray howlgalka hub ka dhigista ee Muqdisho (DHAGEYSO)
Salaad Cali Jeelle oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee caanka ah ayaa si rasmi ah u taageeray howlgalka ay ciidamada isku dhafka ah ee xasillinta ammaanka magaalada Muqdisho ka wadaan degmooyinka ku yaalla gobolka Banaadir.
Siyaasi Salaad Cali Jeelle ayaa sheegay inay muhiim tahay xakameynta hubka sharci darrada ah ee magaalada Muqdisho lala wareegayo, si loo garto kuwa nabad-diidka ah, wuxuuna cambaareeyay dadka arrintaan kasoo horjeeda.
Sidoo kale, Salaad Cali Jeelle ayaa ku amaanay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed C/laahi Farmaajo inay rajo badan shacabka u furtay, iyadoo la dagaalantay musuq-maasuqa, taasoo keentay inuu kordho dakhligii dowladda, islamarkaana xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho ay soo hagaagtay ayna yaraadeen falalkii amni darro oo ay Al-shabaab damacsanaayeen inay magaalada ka fulliyaan bishaan barakeysan ee Ramadaan.
Dhinaca kale, Salaad Cali Jeelle ayaa dadka Soomaalida ah qaarkood ku dhaliilay sida ay u fasirteen howlgalka hub ka dhigista ee ka soconaayo magaalada Muqdisho, wuxuuna dadkaasi ku tilmaamay inay yihiin dadkii hore ee dowladii Xasan Sheekh dhaliilaha u jeedin jiray.
Hadalka Salaad Cali Jeelle ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda cusub ee Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ka bilawday hub ka dhigis lagu sameeynayo ciidanka hubka aan sharciyeysneyn ku dhex wata magaalada, iyaodona arrinkaan ay qeylo dhaan aad u weyn ka timid.